किन उमाल्नु हुँदैन पिउने पानी धेरै समय ? - IAUA
किन उमाल्नु हुँदैन पिउने पानी धेरै समय ?
ramkrishna October 25, 2017	पानी धेरै समय उमाल्नु हुन्छ ? सावधान !
जानेको कुरा हो पानी यत्तिकै भन्दा उमालेर पिउँदा स्वस्थकर हुन्छ । हरेको कुराको एउटा सीमा हुन्छ, त्यस्तै पानी उमाल्नुको पनि सीमा हुन्छ । यदि त्यो सीमा भन्दा बढी पानी उमालेर पिउन थालियो भने स्वास्थ्यका लागि हानीकारक हुनसक्छ ।
जब पानी धेरै उमालिन्छ वा बारम्बार उमालिन्छ, तब यसमा आर्सेनिक, नाइट्राइट र फ्लुराइडको मात्रै धेरै बढ्छ । यीनीहरुको अधिक मात्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।
विषालु नाइट्राइटः पानीलाई धेरै उमाल्दा यसमा नाइट्राइटको मात्रा बढ्दै जान्छ । जुन यसको एक अवयव पनि हो । पानी धेरै उमालेपछि नाइट्राइट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्वमा बदलिने संभावना हुन्छ । किनभने उच्च तापमानमा नाइट्राइट नाइट्रोसेमिनमा बदलिन्छ । जुन क्यान्सरको कारक बन्न सक्छ ।
आर्सेनिकको मात्राः पानी धेरै उमाल्दा यसमा आर्सेनिकको मात्रै बढ्छ । आर्सेनिक धेरै भएको पानी पिउँदा क्यान्सर, मुटुरोगजस्ता बिराम हुने खतरा बढ्छ । जो धेरै समयदेखि आर्सेनिक धेरै भएको पानी पिउँदै आएको छ, उसलाई छाला सम्बन्धि रोग हुने संभावना प्रबल हुन्छ ।
फ्लुराइडको मात्रा बढ्दाः पानी धेरै उमाल्दा फ्लुराइडको मात्रा बढ्दै जान्छ । लामो समयसम्म धेरै फ्लुराइडयुक्त पानी पिउनेमा हड्डि कमजोर हुने रोग देखिन सक्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार पानी ५ मिनेट भकभक उमाले किटाणु रहित हुन्छ । पिउने पानी ५ देखि १० मिनेटसम्म उमाल्नुपर्छ ।nayabato
Previous Previous post: चीनमा शुरु भयो ‘स्मार्ट रेल’, न ड्राइभर चाहिन्छ न त फलामे ट्रयाक
Next Next post: तपाईका बच्चाहरु पनि अन्धा बनाउदै त हुनुहुन्न विवाहित हुनुहुन्छ बच्चा छन अवस्य पढ्नुहोस्